रविका पाँच गर्लफ्रेण्ड ! [भिडियोसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
रविका पाँच गर्लफ्रेण्ड ! [भिडियोसहित]
काठमाडौं, कार्तिक २३ । रवि ओड अहिलेका चर्चित पात्र हुन् । उनी चर्चित हुनुको मुख्य कारण गायन नै हो । रवि अहिले एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल-२’ मा कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनी ‘उत्कृष्ठ ८’ पुगेका छन् ।
आगामी यात्राका लागि उनी झन् कडारुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । यसैबीच, यो साता पनि उनले प्रस्तुति कडा नै दिएका छन् । साथै, उनको गोप्यताबारे पनि रहस्य खुलेको छ । त्यो रहस्य केहो होला ? धेरैलाई खुल्दुली हुनसक्छ !
याे पनि पढ्नुस आमाले सहयोग नगर्नु भएको भए भारतको गल्लीमा भाँडा माझिरहेको हुन्थेः रवि ओड
‘पाँच गर्लफ्रेण्ड !’ साच्चिँकै होलान् रविका पाँच गर्लफ्रेण्ड ? तपाई जे आँकलन गर्नुहुन्छ । नेपाल आइडलकै एक प्रतिस्पर्धीले भने रविको यो रहस्यबारे पोल खोलेका छन् । उनको यो रहस्य आइडलकै अर्का प्रतिस्पर्धी कृष्टल कडेँलले खोलेका हुन् ।
बिहीबार हरेक प्रतिस्पर्धीले एकअर्काको गोप्यता खोलेका थिए । सँगै बस्दा थाह पाएका रमाइला कुरा सबै प्रतिस्पर्धीले बताएका हुन् । त्यसक्रममा कृष्टलले पनि रविबारे रमाइलो कुरा बाहिर ल्याएका छन् । ‘कृष्टलले भने रवि दाईले अस्ति मसँग चार-पाँच गर्लफ्रेण्ड छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहीँ धनगढी तिरकै छरे, एउटा यता काठमाडौंकै, अस्ति भर्खर पोखराको पनि बनाएको छरे..।’ फेरि हाँस्दै कृष्टलले थपे,‘फोनमा हाई बेबी पनि भन्नुहुन्छ ।’
रविबारे कृष्टलले खोलेको यो पोल पश्चात सबै खुब हाँसेकेका थिए । तत्कालै रबिको जवाफ लिदा उनले भने कृष्टलको कुरा नकारे । कार्यक्रमलाई रमाइलो बनाउनका लागि सायद यो अंकमा यस्ता रमाइला कुरा बाहिर ल्याएका हुन सक्छन् ।
रविले बिहीबार ‘संवोधन’ बोलको गीत गाएका छन् । गीत गाएपछि निर्णायकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका थिए । बिहीबार कार्यक्रममा गायक दिपक ब्रजाचार्य मुख्य पाहुना थिए । उनले रविको प्रस्तुती हेरेपछि शब्दमा बयान गर्न नसकेको बताए ।
आज भोटिङ गर्ने दिन भएपनि भोट नगर्न आयोजकले आग्रह गरेको छ । यो साता तिहार परेकाले पनि भोटिङ नभएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । अर्को साताको बिहीबार भने फेरि भोटिङ हुने आयोजकले बताएको छ ।
ट्याग्स: nepal idol, Ravo oad